Isilimela 2018 | Gcina A Isitimela
Inyanga: Isilimela 2018
ekhaya > Isilimela 2018
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu I Flam kaloliwe ukusuka Flam ukuya yena kuthiwa omnye awaya kaloliwe intle kwihlabathi yaye siyaqonda isizathu. Uhambo uthatha iyure kuphela kodwa ezinobuhle ngokwenene umoya-ukuthatha. Ungaphoswa le amava xa usiya…
Ixesha lokuFunda: 5 imizuzu Ukuba une iiveki ezimbini ukuya chitha Spain, enye yeendlela eziphambili ukuhambahamba ukuba ukuhlola Spain ngu Train. akayi kuphela oku kukuvumela ukuba ubone ezinye izinto ezimangalisa kwilizwe, kodwa umdla Uloliwe e Spain kakuhle kakhulu…
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu A umgca Uloliwe entsha uye wasungula, ukufihla Azerbaijan, ikarikuni, no Georgia. Umgca luze 820 Km kwaye yokuhlala freights ukongeza oololiwe abasetyenziswa luluntu. Okokuqala, le iya kuba ngabokuqala ukudibanisa eYurophu China xa adlula Russia. Uloliwe uza kusebenza ukusuka…
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu tips Ukuqeqesha for ojikelezayo Europe kubalulekile ukuba abahambi. Okokuqala, kukho izizathu ezininzi ezahlukeneyo eya eYurophu. Ungafuna ukubona iibhlorho ezintle, kwizikhululo zikaloliwe, kwanobuhle omangalisayo ngokulinganayo. Okanye mhlawumbi uhambela ukubona inkcubeko emangalisayo Italy. on…
Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu Ngokuqinisekileyo Budapest iliziko Hungary. Yinto kwindawo esembindini xa kuziwa ukuba ahambe ngetreyini e Budapest kukho oololiwe ezininzi siyeka. Nangona ezinika ngu Uloliwe e Budapest kwaye ngokubanzi umdla yaye amaninzi amava amatsha ukuba abantu abaninzi,…
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu Okokuqala, khona apho kuya kubakho oololiwe simahla kuze 30,000 nentsha lo hlobo. Inani amatikiti zipalini singeze kuxhomekeka ekubeni ikho na imfuno. I-EU isebe yabhengeza ukuba iza kwenza umnikelo ifumaneke elivisayo kweminyaka 18 nangaphantsi. Ngenxa ye…